Somalia,”Xilliga Kala Guurka Ah Waa Inuu Dhamaadaa August 20,2012″ – Somali PM | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia,”Xilliga Kala Guurka Ah Waa Inuu Dhamaadaa August 20,2012″ – Somali PM
Somalia,”Xilliga Kala Guurka Ah Waa Inuu Dhamaadaa August 20,2012″ – Somali PM
(Oslo, 28 Febraayo, 2012) Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Norway ayaa sheegay in Xilliga Kala Guurka ah uu ku egyahay August 2012 oo aysan jiri doonin muddo kororsi danbe.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa yiri “ Shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaa ka go’an in Xilliga KMG ah la soo afjaro August 2012 oo Soomaaliya ay yeelato Dowlad Rasmi ah oo u adeegeysa Shacabka Soomaaliyeed. Waxaa noo diyaarsan qorshihii lagu dhameystiri lahaa Xilliga KMG ah kaas oo ah Roadmap ka iyo heshiisyadii Garowe I & Garowe II”.
06 dii September 2011 ayaa Dowladda iyo maamulada dalka ka jira ay wada saxiixdeeen Roadmap kaas oo lahaa waqti mucayan ah iyo howlo muhiim ah. Arrimaha Roadmap ka diiradda lagu saaray ayaa kala ahaa Amniga, Dib-u-heshiisiinta & Is-gaaridda dowladda iyo maamulada, Dhameystirka Dastuurka, Dib-u-habeynta Baarlamaanka, iyo Maamul Wanaaga. Dhaqangelinta Roadmap ka waxaa laga qeybgeliyey bulshada qeybaheeda kala duwan oo 26 ilaa 28kii November Bulshada Rayidka ah loo qabtay shir wadatashi oo ka dhacay Muqdisho. Sidoo kale Shirarkii Arrimaha Dastuurka bilihii Diseembar iyo Febraayo ayaa waxaa ka soo qeygalay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qabtay Garowe, go’aanno muhiim u ah mustaqbalka dalkana ay ka soo baxeen.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa yiri “ Shirarkaas Wadatashiga waxey keeneen in Soomaalida ay si aad ah isagu soo dhowaadaan isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan sidii Dastuurka loo ansixin lahaa, isla markaana dib-u-habeyn loogu sameyn lahaa baarlamaanka. Shacabka Soomaaliyeed waxey naga sugayaan Baarlamaan Tayo leh oo matali kara shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ka saari kara dalka marxaladdan adag. Xulidda Baarlamaanka cusub iyo Golaha Deegaanka waxaa iska leh dhammaan qeybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed, mana dhici doonto koox gaar ah ama shaqsiyaad cayiman inay soo xulaan Xildhibaanada Mustqbalka.
Horumarkii baaxadda lahaa ee aan ka sameynay amniga oo Muqdisho, Baledweyn, Baydhabo, iyo goobo kale looga saaray Al-Shabaab, iyo maamul wanaagii aan la nimid waxuu keenay in beesha caalamka ay noo soo jeestaan. Waxaan uga mahadcelineynaa Ra’iisul Wasaaraha UK shirkii London ka dhacay 23ka Febraayo oo beesha caalamka isu keenay, isla markaana mideeyey mowqifkooda ku wajahan Soomaaliya. Sidoo kale waxaan u mahadcelineynaa dhammaan mas’uuliyiintii ka soo qeybgashay shirka London. Fursadan Dahabiga ah ee David Cameron noo sameeyey waa inaan ka faa’iideysanaa oo ka miro dhalinaa. Cid allaale cidii is-hortaagta geedi socodka nabadda iyo dhaqangelinta Roadmapkana waa in meel looga soo wada jeestaa isla markaana ay Beesha Caalamku ka qaadaan tallaabo adag. Ma dhici doonto in horumarka Shacabka Soomaaliyeed caqabad lagu noqdo, waana inay dhammaataa waqtigii dambi inta la galo ummadda lagu sii dhexjiro.
Soomaaliya waxey ku soo jirtay KMG muddo ka badan 10 sano, waxaana la joogaa waqtigii uu shacabka Soomaaliyeed uu heli lahaa Dowlad Rasmi ah oo u adeegta shacabka Soomaaliyeed.
Tags: News, Socdaalka TFG da, Somali PM. Prof. Abdiweli M. Ali, Warsaxaafadeed
Assad could be classified as a war criminal – Clinton Let Syrians decide their future – diplomat